Mogadishu Journal » 2019 » July » 7
Ciyaaryahan Messi oo dhaleeceyn weyn la kulmaya
Mjournal :-Madaxda kubadda cagta ee Laatiin Ameerika ayaa sheegay in eedaha ah in ay su’aal ka taagan tahay hufnaanta Copa America ay tahay kuwo aan “sal lahayn” iyo “inay ka dhigan tahay xushmo darro”. Kabtanka xulka Argentina Lionel Messi ayaa ku andacooday in tartankaasi ...
Madaxweyne Farmaajo oo Qaabilay wafdi ka socday QM
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Madaxtooyada ku qaabilay U Qeybsanaha dhanka Taageerada Hawlgallada ee Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobey Mudane Atul Khare. Madaxweyne Farmaajo iyo Mudane Atul Khare ayaa ka wada...
Mjournal :-Wakiilka Cusub ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa safarkii ugu horeeyay ku tegaya Magalada Garoowe tan iyo markii la soo magacaabay. Wararka laga helayo Garoowe ayaa waxaa ay sheegayaan in James Swan uu Maalinta berito ah oo...
Mjournal :-Xulalka Qaranka Koonfur Afrika iyo Nayjeeriya ayaa u gudbay wareegga 8 dhammaadka koobka Qammada qaaradda Afrika 2019, kaasi oo si habsami ah uga socda Wadanka Masar, kaddib markii ay kala garaaceen xulkii marti-gelinaya tartanka sanadkan ee Masar iyo Kaamaruun. South...
Mjournal :-Waxaa Magaalada Gaalkacyo lagu qabtay haweeney yaab leh oo in muddo ah iska dhigeysay inay tahay Nin taasoo u lebisan jirtay sidda ragga, iyadoo kiiskeeda baaritaan lagu bilaabay, laguna xiray saldhigga Booliska magaaladaasi. Taliyaha Booliska Gobolka Mudug Maxamed...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Hargeysa,kadib safar uu maalmahaan ugu maqnaa dalalka Gini iyo Itoobiya oo ka mid ah wadamada Qaarada Afrika. Wafdiga Madaxweyne Muuse Biixi oo ay ka mid yihiin Madaxweynaha oo ay...
Mjournal :-Warar ka imanaya dalka Koofur Afrika ayaa sheegaya in burcad Koofur Afrikaan ah ay xalay fiidkii dalka Koofur Afrika ku dileen muwaaddin Soomaaliyeed oo magaciisa lagu sheegay Xuseen Cali Saqiir. Dilka ayaa ka dhacay degaanka Naas ee Gobolka Mpumalanga,ee dalka Koofur...
Gabar Yar oo Meydkeeda laga helay dulleedka degmada Cadaado
Mjournal :-Wararka laga helayo deegaanka Godinlabe o ku yaalla duleedka Magalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay mid ka mid ah Xaafadaha deegaankaas lagu arkay meydka Gabar da’ahaan lagu qiyaasay 10 jir taas oo la dilay. Wariyeyaal ku sugan...
Dowladda oo soo saartay Amar ku socda Hay’adaha Caalamiga ee degan Muqdisho
Mjournal :-Dowladda Soomaaliya ayaa Warqad u dirtay Hay’adaha degan Xerada Xalane ee caalamiga ah,sida Qaramada Midoobey, Midowga Yurub, AMISOM, safaaradaha , sharikadaha duullimaadka iyo dhamaan hay’adaha kale ee Caalamiga. Warqada ayaa lagu ogeeysiiyay in ay Magaca Garoonka...